Jowhar.com : Somali Leader News - News: Madaxweyne Xasan Sheekh oo booqday ciidamadii dhaawacyada ka soo gaareen weerarkii Buuloburde(Sawiro)
April 20 2014 19:24:19
Madaxweyne Xasan Sheekh oo booqday ciidamadii dhaawacyada ka soo gaareen weerarkii Buuloburde(Sawiro)
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kormeeray ciidamadii ku soo dhaawacmay weerarkii xalay lagu qaaday magaalada Buuloburde ee gobolka Hiiraan.
Booqashada madaxweynaha oo ay ku weheliyeen wasiirka gaashaandhigga Maxamed Sheekh Xasan,Taliyaha Ciidanka xoogga dalka Jeneraal Daahir Aadan Cilmi iyo saraakiil kale ayaa ahayd sidii uu madaxweynaha uu indhihiisa ugu arki lahaa heerka uu gaarsiisan yahay dhaawacyada soo gaaray ciidamado isugu jira Soomaali iyo Jabuti ee ku sugnaa degmada Buuloburde.
Madaxweynaha iyo saraakiisha la socotay markii ay gaareen Isbitaalka Xalane waxa ay kormeereen qolalka la seexiyay dhaawacyada iyaga oo xaaladooda caafimaad ka wareystay dhaqaatiirta ku sugan isbitaalka.
�Sida ay dhagar qabayaashu damacsanaayeen iyo waxa aan aragnay aad bay u kala fogyihiin, geesinimo dheeri ah yay ka qaadeen ciidamadu, cadowga waxa uu damacsanaa iyo sida ay ciidanka uga hortageen waa wax aan caadi ahayn, inta dhaawacooda halista ku jirta waxaa lagu dadaalayaa sida lagu daaweyn karo oo dalka dibediisa loogu qaado, kuwaan iyo kuwa kale ee codowga la diriraya ku dhaawacma dowladdu waxa ay ku dadaalaysaa daaweyntooda iyo daryeelkooda� ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.
�Dadka Soomaaliyeed waxaan markale u sheegaynaa in nimankaasi ay yihiin cadow aan dalka. dadka, iyo diinta aan wax u ogoleen, marka waxaan rabnaa in si wada jir ah loola dagaallamo cadowga umadda Soomaaliyeed, teeda kale mudadda yarta ah ee dagaalku lagula jiro shacabka waxa looga baahanyahay inay sii xoojiyaan taageeradooda� ayuu Madaxweynuhu hadalkiisa ku daray.
mahad on March 18 2014
0 Comments · 5859 Reads
Jowhar.com684,811 unique visits